लोकन्थलीमा पुनःपहिरो, सडक भासियो, ६ घर उच्च जोखिममा – EngineerKhabar
मध्यपुरथिमि, १५ भदौ : मध्यपुरथिमि नगरपालिकाको वडा नं १ लोकन्थलीमा आज बिहान पुनःपहिरो गएको छ । पहिरोमा सडक भासिनुका साथै छ घर उच्च जोखिममा परेको छ ।
सोहि क्षेत्रमा प्रारम्भिक अध्ययनमा पुगेका ई. प्रवीण आचार्यकाअनुसार सुरुमा भत्किएको ठाउँमामा घरायसी पानीको निकासका कारण सो क्षेत्र ओशिलो रहेको थियो । उक्त ठाउँ एकदम भिरालो क्षेत्रमा अवस्थित रहेको र उक्त ठाउमा ढुंगाको ठुलो गाह्रो लगाई बाटो निर्माण गरिएको थियो । उक्त गाह्रोको गहिराई थोरै रहेको हुदा त्यस्तो घटना घटेको हुन सक्ने जानकारी ई. आचार्यले दिएका थिए । भर्खरै गएको पहिरोको पश्चिमतर्फको भाग जोखिमपूर्ण रहेको र त्यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नसकेमा त्यसले मानवीय जोखिम समेत थप्ने सम्भावाना रहेको छ।